Momba anay - Huizhou Kaiwansi Electronic Technology CO., LTD.
Earphone amin'ny fehy
Huizhou mpandray ny Electronic Technology CO., LTDmiorina ao an-tanànan'i Huizhou, Faritanin'i Guangdong. Limited dia matihanina mpanamboatra finday avo lenta avo lenta, mifantoka amin'ny R&D, famokarana ary marketing mandritra ny 9 taona.
Ny vokatra lehibe dia misy ny vozona, headband ary sofina Tws. Ny orinasanay dia manana velaran-tany mihoatra ny 3,000 metatra toradroa misy mpiasa maherin'ny 200 sy tsipika famokarana matotra 4. Amin'izao fotoana izao, mihoatra ny 200 000 isam-bolana ny fahafaha-mamokatra ary ny vokatra dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra 150 mahery. Ankoatr'izay, ny vokatra dia nahazo fankasitrahana lehibe tamin'ny tsena isan-karazany eran'izao tontolo izao. Ary manohana ny fango fanao amin'ny vokatra izahay.
WIzy ireo dia manana fitaovana fanandramana mandroso, fitaovana famokarana ary rafitra fitantanana mba hahazoana antoka fa vokatra avo lenta. Ny entanay rehetra dia manaraka tsara ny ISO9001: 2015 Quality Control Systems.
Hatramin'ny niorenan'ny taona 2010 dia manokana hatrany ny famolavolana ny vokatra, ny fifehezana kalitao ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa ny KAIWANSI izay mamaly haingana ary mahatratra ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny ezaka mitohy, KAIWANSI dia fantatry ny mpanjifa amin'ny famokarana vokatra avo lenta. Ary miaraka amin'ny departemanta R&D matihanina, KAIWANSI fampandrosoana tsy tapaka ny vokatra avo lenta sy manavao izay mifanaraka amin'ny fangatahan'ny tsena. Ny soatoavin'ny orinasan'ny orinasanay dia ny fanavaozana, ny firaisankina, ny fandraisana andraikitra ary ny asa mafy. Ary ny mpikambana tsirairay eto dia afaka manatsara ny fahaizany manokana amin'ny fananganana marika ny orinasa.
TAndro ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa mpivarotra dia manome serivisy OEM sy ODM ho an'ny marika ambony maro izahay tato anatin'ny taona lasa. Tamin'ny volana jolay, 2019, mba hanitarana ny sehatry ny orinasa INDIA SY EURO ary hahafantatra bebe kokoa momba ny tsena, KAIWANSI dia nanangana ny departemantan'ny varotra any ivelany, mandritra izany fotoana izany dia namorona ny marika FITHEM KAIWANSI ... Ny fahombiazantsika dia tsy avy any ambony ihany fiahiahiana kalitao, fa avy amin'ny fahatokisan'ny mpanjifa sy ny fanohanany. Ary nahazo laza tsara sy laza teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary nahazo laza tsara ihany koa teo am-panaovana fiaraha-miasa Soso-kevitra momba ny fanatsarana ny vokatra. Miarahaba anao izahay hitsidika ny orinasa ary mitady fiaraha-miasa maharitra.
Adiresy: 2nd Floor, No.149, Shahe Avenue, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Provinsi Guangdong, Sina